sell prolink netbook, hp pavilion laptop, ipod touch and iphone - MYSTERY ZILLION
sell prolink netbook, hp pavilion laptop, ipod touch and iphone
October 2010 edited November 2010 in Laptops & Notebooks Sale
I would like to sell prolink netbook TA-009 with memory 2G3cell battery, hp pavilion dv2615tx, ipod touch 2G not MC model and iphone 3GS 32G warranty until 2012 march...! so let's start the auction about that. Please reply who are really interested it. Thanks you
Prolink netbook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးလို့ရမလား ဘယ်လောက် warranty ကျန်သေးလဲ။ ဘယ်စျေးလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
warranty card က ပျောက်နေလို ့အစ်ကိုရေ။KMD က၀ယ်တာပါ။ အာမခံ ၂ လ လောက်တော့ ကျန်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်။model no:TA-009 နဲ ့ရှာကြည့်ပါ။အတူတူပါဘဲ။ memory သာ 2G upgrade ပြောင်းထားတာ။၀င်းဒိုးကwindow7ကိုhack ထားတာပါ။ update ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်ဘာerror မှမပြပါ။ kaspersky 2011 license version ပါပါတယ်။ စျေးကတော့ ၂သိန်းလောက်ခန် ့မှန်းပါတယ်။ Thanks you for your interested
I would like to know detail specification of your "hp pavilion dv2615tx" and the price.
core2duo T7250 2G Hz
Graphic nVidia 128MB sharing 816MB
if u are interested tell me how much can u pay?
hiphop.lfc wrote: »
I have already sent PM to you.
iphone 3GS 32GB လေးကိုစိတ်၀င်စားပါတယ်...ဘယ်စျေးလောက်ရရင်ရောင်းနိုင်မလဲသိချင်ပါတယ်..jail break ကောလုပ်ထားလားမလုပ်ရသေးဘူးလားပါသိချင်ပါတယ်...warrenty ကကော ဘယ်မှာရမှာလဲ မြန်မှာမှာပဲလား သိချင်ပါတယ်...
550000 လောက်ရရင်ရောင်းမယ်။jail break ကော application တွေကောထည့်ပြီးသား။warranty က သိန်းမင်းဆိုင်ကပါ. 2012 အထိရှိပါတယ်။ travel pac cover ပါပါတယ်
အစ်ကိုရေကျနော်မေးကြည့်တာတော့ iphone 3GS ကိုအခု ၆သိန်းကျော်ကျော်နဲ့ရတယ်ပြောပါတယ်....အစ်ကိုကော စျေးထက်လျှော့ပေနိုင်မလားဗျ...ကျနော်စျေးကိုသေချာတော့မသိပါဘူး..သူငယ်ချင်းကပြောတာပါ.... ကျနော်သေချာစုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါမယ်...ပြီးရင်အစ်ကို့ကိုသေချာပြောမယ်လေ....ကျနော်လဲ၀ယ်သင့်မ၀ယ်သင့်က Money ကိုချိန်နေရလို့ပါ...ပြန်ဖြေတာကျေးဇူးပါ....
I would like to know about ipod touch 2g Plus your estimated price..
Please sent PM to me..